Raritaankii ugu horreeyay ee tallaalka COVID-19 wuxuu yimid dhammaan saddexda Gobol ee Siouxland. | KWIT
Raritaankii ugu horreeyay ee tallaalka COVID-19 wuxuu yimid dhammaan saddexda Gobol ee Siouxland.
By Halima Osman • Dec 14, 2020
Somali News 12.14.2020
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu leeyahay Degmada Woodbury waxay heli doontaa kudhowaad 2,000 oo qiyaas oo ah tallaalka Pfizer (f-eye-zer) maalmaha soo socda ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka safka hore. Qiyaaso kale ayaa ku imaan doona wejiyo iyo shabakada farmashiyaha ee qaran ayaa u qeybin doonta qiyaaso dheeri ah xarumaha daryeelka muddada-dheer.
Marka tallaalka Moderna (muh-dern-uh) uu helo tallaabada hore waxaa jiri doona 400 qiyaasood oo loogu talagalay shaqaalaha EMS ee Gobolka Woodbury.
Degmada Dakota looma qorsheynin inay hesho tallaalka wali. Laakiin, markay sidaas tahay, shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo dadka deggan xarumaha daryeelka muddada-dheer iyo shaqaaluhu waxay heli doonaan mudnaanta koowaad. Tallaalka waxaa lagu qiyaasaa inuu heli karo dadweynaha guud bisha Abriil.
Saraakiisha caafimaadka ee maxalliga ah waxay yiraahdaan iska ilaali khiyaanooyinka ku hareeraysan tallaalka, oo ay ku jiraan wicitaannada taleefannada ee kooxaha sheeganaya inay bixiyaan marin kaar bixinta deynta. Waxay yiraahdaan markii tallaalka la heli karo kooxaha halista sare leh, dhakhaatiirta maxalliga ah waxay go'aan ka gaari doonaan cidda la tallaalayo.
Agaasimaha Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa sheegay in xayiraadihii ugu dambeeyay ay shaqeynayaan maadaama heerarka infekshannada cusub iyo isbitaallada la dhigaayo ay ku soo socdaan deegaan ahaan. Waxaa jiray 43 kiis oo cusub oo ka dhacay Degmada Woodbury oo la soo sheegay Isniintii ku dhowaad 11,500 tan iyo markii uu billowday cudurkan faafa. Waxaa jiray 145 dhimasho 52 dhimashana ee Degmada Dakota. Tirada isbitaalada ayaa hoos u dhacay labadii todobaad ee la soo dhaafay laga bilaabo 108 ilaa 59 maanta iyadoo 39 ay la dagaalamayaan COVID-19 kaliya.
By Halima Osman • Dec 11, 2020
Qorshayaasha qeybinta tallaalka waxaa ka wada hadli doona gelinka dambe ee Isniinta saraakiisha caafimaadka bulshada ee Siouxland. Waaxda Caafimaadka Degmada Siouxland iyo Waaxda Caafimaadka ee Degmada Dakota waxay qaban doonaan shir jaraa'id gelinka dambe ee Isniinta Machadka Amniga ee Galbeedka Iowa Tech, si ay u bixiyaan macluumaad la xiriira qorshooyinka tallaalka COVID19. Shirkaas jaraa’id waxaa lagu wadaa 1:30 pm. Isniinta.
Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa ku dhajiyay barasaabkii hore ee Iowa Tom Vilsack inuu mar lab
By Halima Osman • Dec 10, 2020
Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa ku dhajiyay barasaabkii hore ee Iowa Tom Vilsack inuu mar labaad noqdo xoghayaha beeraha Mareykanka.
Vilsack wuxuu siddeed sano soo ahaa xoghayaha beeraha xilligii madaxweyne Barack Obama wuxuuna muddo dheer taageere u ahaa Biden